पाहुनामार्फत भित्रिएको कोरोना भोजभतेर र जमघट हुँदै घरसम्म - नेपालबहस
पाहुनामार्फत भित्रिएको कोरोना भोजभतेर र जमघट हुँदै घरसम्म
| ८:२४:३५ मा प्रकाशित
४ जेठ, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ मा पर्ने सिंगा र तातोपानी क्षेत्र कोरोना संक्रमणको केन्द्र बनेको छ । तातोपानी कुण्ड स्नानका लागि आएका पाहुनामार्फत भित्रिएको कोरोना भोजभतेर र जमघटबाट टोल बस्ती हुँदै नागरिकका घरसम्म पुगेको छ ।
सिंगाका वडाध्यक्ष गोविन्द पौडेलका अनुसार वडाभर हालसम्म ६५ भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने दुई जनाको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको बेनी नगरपालिकाका ५१ जना सबै संक्रमित वडा नं ४ का हुन् । वैशाख २७ गते नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले लक्षण देखिएका र सङ्क्रमितको नजिकको सम्पर्कमा रहेका ६७ जनाको सिंगामा स्वाब सङ्कलन गरेका थिए ।
“तातोपानी, सिंगा, बास्कुना, थामडाँडा, डाँडाखेत र सुर्केमेलामा बढी संक्रमित छन । कतिले अझै परीक्षण गरेका छैनन”, वडाध्यक्ष पौडेलले भने, “छुटेका र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको मंगलबार पुनः तातोपानीमा स्वाब सङ्कलन गर्दैछौँ ।”
गत वैशाख १४ गते तातोपानीका होटल व्यवसायीहरुलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको थियो । वडाध्यक्ष पौडेलका अनुसार यसअघि बेनी नगरपालिकाको वडा नं ४ मा १६ संक्रमित थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले म्याग्दीका तातोपानी कुण्ड बन्द गराउन निर्देशन दिनुभन्द्या अघिदेखि नै तातोपानीमा भित्रिएको कोरोना फैलिने क्रममा थियो ।
तातोपानीको उपल्लो र तल्लो बजार सोमबार दिउँसो सुनसान थियो । पसल तथा होटल बन्द थिए । मानिसहरु झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेका थिए । उनीहरु कोरोनादेखि डराएको जस्तो वातावरण थियो । लक्षण देखिएका र सम्पर्कमा रहेकाहरुको स्वाब परीक्षण, उपचारका साथै थप फैलिन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको वडाध्यक्ष पौडेलले बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली संक्रमितको घरमा पुगेर अवस्था बुझ्ने र हौसला दिन थालिएको बताए ।
यसैबीच बेनी नगरपालिकाका ५१ सहित म्याग्दीमा सोमबार ८२ नयाँ संक्रमित थपिँदा ५३ जनाले कोरोना जितेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना जित्नेमा बेनीका तीन महिनाको शिशुदेखि रघुगङ्गाका ८९ वर्षका वृद्धसम्म छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा रघुगङ्गामा थप ११ संक्रमित भेटिएका छन् । चौध जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । उनीहरु सबै वडा नं ४ का हुन् । रघुगङ्गाको वडा नं ४ मा पर्ने दग्नाममा वैशाख तेस्रो साता भूमे पूजा भएको थियो ।
एन्टिजेन परीक्षणबाट रघुगङ्गामा तीन, धवलागिरिमा १४, मङ्गलामा दुई र अन्नपूर्णमा एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख लम्सालले बताए । धवलागिरिका संक्रमित वडा नं २ लुलाङ र लम्सुङका हुन् ।
हालसम्म ९६७ संक्रमित रहेको म्याग्दीमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या ४४४ जना छ । म्याग्दीबाट पठाइएको ४१६ वटा स्वाब नमूनाको नतिजा आउन बाँकी छ । वैशाख २२ गते रातिदेखि शुरु भएको निषेधाज्ञा जेठ १० गतेसम्म लम्बिएको छ ।
परीक्षणको दायरा बढाए पनि पीसीआरको नतिजा आउन ढिलाइ हुँदा जोखिम र कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती छ । पालिकास्तरमा आइसोलेशन सञ्चालन गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरु लक्षण देखिएकाको परीक्षणका साथै होम आइसोलेशनमा बसेकालाई भेटेर हौसला बढाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गरिरहेका छन् ।
बेनी अस्पतालमा सञ्चालित आइसोलेशनमा बिरामीको चाप बढेको छ । सोमबार केही समय अस्पताल परिसरमा संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँको अभाव भएको थियो । पोखरा पठाएको सिलिण्डर भरेर आउन ढिलाइ हुँदा अक्सिजन अभाव हुने चिन्ताले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चिन्तित देखिन्थे ।
बेनी अस्पतालको आइसोलेशनमा नौ पुरुष र सात महिला उपचाररत छन् । तीन जना निको भएर घर गएका छन् । उन्नाइस जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको अस्पतालमा १२ को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । एन्टिजेन नेगेटिभ आए पनि चार जनालाई निगरानीमा राखेर उपचार गरिएको छ । रासस
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार ४७ मिनेट पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा ९ मिनेट पहिले
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र १६ मिनेट पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने ४१ मिनेट पहिले
सर्लाहीको बजारमा विषादीयुक्त आँप बिक्री ३ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? १४ घण्टा पहिले
कर्णालीका १० जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री ६ दिन पहिले
विकास बैंक समूहको परिसूचक साढे सात प्रतिशतले बढ्यो, ज्योति विकासको शेयरमूल्यमा सर्किट ३ हप्ता पहिले
खानीखोला हाइड्रोको शेयर कारोबार रोक्का २ हप्ता पहिले
गुगल प्लसमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सबै कार्यालय अपडेट ३ हप्ता पहिले
सुरक्षाकर्मी नै धमाधम क्वारेन्टाइनमा जान थालेपछि के गर्ने ? यसो भन्छन् पूर्व एआईजी अधिकारी १ वर्ष पहिले
३ बुँदे सहमति अनुमोदन, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा ४ महिना पहिले
संसद पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन गर्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको निर्णय ५ महिना पहिले